Home Wararka Gudiyadii loo xilsaaray xalinta shaqaaqada Boosaaso oo howlahoodii gudagalay
Gudiyadii loo xilsaaray xalinta shaqaaqada Boosaaso oo howlahoodii gudagalay
Odoyaashii iyo gudiyadii loo xilsaaray xalinta shaqaaqada ka dhacday magaalada Boosaaso oo howlahoodii gudagalay. Magaalooyinka garoowe iyo boosaaso ayaa waxaa ka soconaya kulamo xal nabadeed loogu dhammeynayo colaadda ka taagan magaalada boosaaso kaddib markii halkaas ay ku dagaalameen ciidamada puntland iyo kuwa PSF.
Isimada waxgaradka iyo siyaasiinta reer puntland oo ay ugu hooreeyaan madaxweynayaashii hore ee soo maray puntland iyo reysal wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirasiid cali sharma,arke ayaa gogol nabadeed dhigay magaalada boosaaso kaddib markii ay la kulmeen marka hore madxweynaha puntland siciid cabdullaahi deni iyaga oo dhanka kale kulan la qaadanaya taliyaha PSFta maxamuud cisman diyaano si loo dhammeeyo colaadda taagan.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in inta badan la xaliyay tabashadii ka dhalatay xil ka qaadista taliye diyaano iyada oo haatan loo gudbayo qeybaha ugu dambeeya ee xal raadinta. Maalmaha soo aaddan ayaa la tilmaamay in lasoo afmeerayo nabad u raadinta colaadda boosaaso iyada oo labada dhinac kala saxiixanaya heshiisyo nabadeed
Previous articleRW Rooble oo amray in la sii daayo Mukhtar Roobow
Next articleU.S. Supports Somali PM’s Efforts For Quick, Credible Vote
Gudoomiyaha Jabhada OLF Dawuud Ibsa oo ka digay dagaal sokeeye oo...
Cunaqabateynta saaran Kismaayo oo sababtay in 200 qof ay shaqadoodii ku...